Andiam-pitambarana mahery vaika avy amin'ny Parasyte: The Maxim (Sary) - Hafa
Vondron-teny mahery avy any Parasyte: The Maxim!
Payastye The Maxim nitanisa, nalaina avy amin'ireto karazana anime ireto:
Parasyte: Ny Maxim dia ilay karazana anime izay hampiodina ny vavoninao, noho ny maizina azy. Ary hampisaintsaina anao, noho ny fihevitr'izany fihantsiana izany.
Tsy dia misy teny nisaina be loatra toy ny anime hafa izay mitovy, fa eto daholo ny TSARA farany hitanao amin'ny Internet!
Lisitry ny Parasyte The Maxim Quotes:
1. Shinichi Izumi Quotes
'Indraindray tsy afaka mihemotra amin'ny ady ny olombelona.' - Shinichi Izumi
'Raha tsy mahavaha ny olana ny resaka dia mety hampijaly kely ianao raha mampanaintaina.' - Shinichi Izumi
'Angamba ny olombelona no zavatra akaiky indrindra an'ireo demonia velona.' - Shinichi Izumi
'Tamin'ny farany, tsy afaka nahita zavatra tamin'ny fomba fijerin'ny katsentsitra aho, tsy naninona izany avy tamin'i Migi. Tsia mazava ho azy. Tsy azo natao hatramin'ny voalohany. Amin'ny maha karazana roa samihafa antsika dia mety mifanararaotra isika indraindray ary mifamono, fa tsy azo atao ny mifankahazo. Raha ny marina dia tsy tokony hieritreritra akory ianao fa nahita karazana hafa mifototra amin'ny fenitrao. Heveriko fa avonavon'olombelona ny mieritreritra fa takatsika ny zavatra tsapan'ny endrika fiainana hafa. Mety tsy misy endrika fiainana hafa izay tena 'sakaiza' ho an'ny olombelona. Na eo aza izany, na dia tsy takatsika aza izany, dia mpiara-monina mendrika antsika izy ireo, tsy isalasalana. ' - Shinichi Izumi
'Rehefa mahatsapa ny androm-piainanao ianao dia hiposaka ny tena toetranao.' - Shinichi Izumi
'Sarobidy ny ain'ny olombelona, ​​sa tsy izany?' - Shinichi Izumi
“Mampanaintaina izaitsizy… zara raha miteny amin'ny alahelo aho, nefa tsy tomany.” - Shinichi Izumi
'Tsy tokony hivoaka vava ianao rehefa tsy fantatrao sh **' - Shinichi Izumi
2. Tamura Reiko Quotes
“Ianareo rehetra manambany olona. Indraindray dia mety ho malemy izy ireo, saingy tsy izany no izy. Ny zavatra tokony ho fantatsika dia ny olombelona dia endrika fiainana tokana ahitana olona an-tapitrisany. Ankoatry ny atidohany, ny olombelona dia manana 'ati-doha' hafa manana habe lehibe tokoa. Raha vao manohitra an'io atidoha io isika dia ho resy. ” - Tamura Reiko
'Efa ela aho no nieritreritra…. Inona no antony nahaterahako teto amin'ity tontolo ity? Isaky ny mamaha fanontaniana iray aho dia hisy fanontaniana hafa hiseho eo amin'ny toerany. Nikatsaka ny fiandohana aho. Nitady ny farany aho. Nandeha an-tongotra sy nandehandeha fotsiny aho, nieritreritra foana. Angamba tsy hisy hiova, na ho lasa lavitra aho. Raha ajanoko ny diako dia tsara ihany koa izany. Na dia nampandrenesina aza aho fa efa tonga amin'ny fiafarany ny zava-drehetra dia hanaiky azy fotsiny aho. Na eo aza izany dia nahita valin'ny fanontaniako iray hafa aho androany. ” - Tamura Reiko
3. Migi Quotes
“Mamono zavatra hafa ianao mba hahafahan'ny fiainanao hitohy. Toy izany no iainan'ny biby. Ny olombelona dia zavaboary tsara fanahy mamono tena. ” - Migi
“Shinichi, rehefa nandinika ny hevitry ny demonia, mino aho fa, amin'ny fiainana rehetra, ny olombelona no zavatra akaiky azy indrindra. Na dia mamono sy mihinana karazana fiainana isan-karazany aza ny olombelona, ​​ny karazany dia mihinana karazana iray na roa fotsiny farafaharatsiny. Tena mitandrina isika raha mampitaha. ” - Migi
4. Ryoko Tamiya Quote
“Ny lalitra mahay misidina nefa tsy ampianarina. Ny hala dia mamily tranonkala nefa tsy ampianarina. Fa nahoana izany? Ity no eritreritro: manidina baiko fotsiny ny lalitra sy hala. Mino aho fa ny fiainana rehetra eto ambonin'ny tany dia nahazo baiko isan-karazany. Tsy manana toromarika ve ny olombelona? Rehefa naka ny sahan'ity olombelona ity aho dia nahazo toromarika. Hoy izy hoe: Sasao ity karazana ity. ” - Ryoko Tamiya
“Fa maninona ny olombelona no tsy mahay mandanjalanja.” - Ryoko Tamiya
Teny ntaingo maizina indrindra avy amin'ny fikafika ny fiainana sy ny famoizam-po
Andiany iray amin'ireo teny faran'izay tsara indrindra avy amin'ny Girl Girl of Sakurasou
Karakter Anime 8 izay toy ny Tekashi 69 ihany
11+ mpandray anjara amin'ny Anime Simp izay tsy noheverinao akory
Fitsipika tsy voalaza 7 tokony harahina rehefa mijery Anime
Anime dia noheverina ho ambaratonga ambany indrindra amin'ny fanararaotana zaza, araka ny torolàlana avy amin'ny polisy federaly aostralianina
Ny vokatry ny psikolojikan'ny anime, ary ny fiantraikan'ny mpankafy
Ny lisitry ny seho fahitalavitra anime farany andrasana amin'ny taona 2019!
Maninona no mbola malaza be i Vic Mignogna noho i Jamie Marchi & Monica Rial
25+ Fitiavana Diabolik Lehibe momba ny tantaram-pitiavana sy famoizam-po
Fanononana 4 Rena Ryuugu izay mendrika hodinihina
Azonao atao izao ny mijery ny sarimihetsika japoney an-tserasera maimaimpoana ao amin'ny Virtual Shibuya
anime izay maneso ny anime
ny anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
lisitry ny sary slice of life